Pokémon dia naka sary an-tsaina ny tena zavaboary eto amin'izao tontolo izao | Famoronana an-tserasera
Pokémon dia nahavita ho iray amin'ireo franchise malaza indrindra misaotra ireo karazana zavaboary goavambe ananany. Ankehitriny dia mpanakanto iray izay namerina namorona an'i Pokémon ho zavaboary tena izy azo azo kitihina sy "tsapa".
Aza miaina mazava ho azy, fa tsy maintsy asainy mijoro eo alohanao izy ireo hahafantatra amin'ny tenanao manokana hoe hanao ahoana ny fahitana ireo Pokémon mihetsika sy mihetsika. Saika azo natao tamin'ny fihazana Pokémon tsy manam-petra ao amin'ny Pokémon GO ho an'ny finday avo lenta.
Joshua Dunlop no mpanakanto iza no namerina naka sary an-tsaina ireo zavaboary Pokémon hitondra azy ireo mahitsy amin'ny tena izy miaraka amin'ireo sombin-javatra mahatalanjona vita amin'ny zavakanto 3D. Ho isam-bolana izany rehefa hamorona Dunlop avy amin'ny pejiny tao Patreon, iray amin'ireo tarehimarika Pokémon.
Ny tanjonao dia ny hanana tranonkala iray manontolo izay mampiseho ny tsirairay amin'ireo zavaboary izay malaza amin'ny olona tsy mitovy taona aminy. Toa mody a karazana "National Geographic" mampiseho ny fahazarana amin'ny fiainana, ny sakafony ary na aiza na aiza faritra misy an'izao Pokémon izao. Toy ny hoe ho hita eo amin'ny tontolo tena izy ireo.
Ary araka ny hitanao, Dunlop mahatoky amin'ny sary miaraka amina sary kanto 3D mahafinaritra izay mamindra fiainana sy loko maro. Ankehitriny isika dia tsy afaka mahita azy ireo amin'ny tontolo tena izy miaraka amin'ny asa miankina amin'ny fanontana 3D sy ny loko omeny amin'ny asa iray izay hanana zavatra iray amin'ny mpanao asa-tanana.
Na izany na tsy izany, ampahany rehetra amin'ny afaka manome sy miasa miaraka amin'ireo maodely 3D samihafa mba hanakaikezan'izy ireo ireo Pikachu rehetra sy ireo zavaboary fanta-daza amin'ity tontolo Pokémon ity izay hitohy miaraka amintsika mandritra ny fotoana maharitra. Avelanay ianao ity mpanakanto manova Pokémon ity, amin'ny alàlan'ny fanaovana sary, amin'ny olombelona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ny mpanakanto dia mihevitra an'i Pokémon ho tena zavaboary ary mahatalanjona ny vokany
PIXL, na manamboatra ny "LEGO" amin'ny ho avy